Dowllada Kenya oo codsi Miletari ka dalbatay Israel
Nairobi:-Ra.iisul wasaraha dowllada Kenya Raila Odinga ayaa waxaa uu codsi u dirsaday shuftada Israel si ay gacan uga siiyaan dagaal ka ay ciidanka Kenya ka wadaan gobalka J/hoose.
Ra.iisul wasaaraha dowllada Kenya, Raila Odinga ayaa waxaa uu ka codsaday dowllada Kenya in ciidanka dalka Kenya ay ka taageeraan tababarka dhinac ciidanka ,Sirdoonka iyo qaabka looga hortago qaraxyada iyo dilalka qorshaysan.
Dowllada Kenya ayaa war-saxaafadeed ay u qaybiyeen maanta saxaafada dalka Kenya ayaa waxaa ku qornaa in dowllada Kenya ay codsi dhinac ciidanka ah ay ka codsatay Israel iyadoo codsigaasa ay gaarsiiyeen xafiiska Madaxweynaha Yuhuudda Shimon Peres .
ilaa iyo intii ay ciidanka dowllada Kenya ay ku soo xadgudbeen xadka Soomaaliya ayaa waxaa ay codsiyo kale duwan ay u dir sadeen dalalka IGAD iyo EU si ay uga caawiyaan dagaalka ay kula jiraan ururka Al-shabaab oo iyagu gacanta ku haya Gobollada Jubooyinka inta badan.
Codsiga ay dowllada Kenya u dirsadeen Israel ayaa ku soo beegmaya iyadoo dagaal dhowr ah ay ka dhaceen degaano ka tirsan Gobolka Gedo iyo Gobollada Jubooyinka iyadoo dagaaladaas ay ciidanka dalka Kenya ay ka soo gaáreen khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac.